Summer Course Refund – Mandalay International Science Academy
July 21, 2020 Wai Yan
We would like to inform you that full (100%) refunds for the Summer Course will be handed out in September.
Asagesture of appreciation, all those who enrolled for the Summer Course are also eligible foraspecial discount for our Weekend English Language Course, which takes place every Sunday from August 16 to March 28.
We thank you for your patience and understanding during this difficult and testing time for everyone.
Summer School အတှကျ သငျတနျးကွေးမြားအား စကျတငျဘာလတှငျ ၁၀၀% ပွနျအမျးပေးမညျဖွဈကွောငျး အသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ။
ဩဂုတျလ ၁၆ ရကျနမှေ့ မတျလ ၂၈ ရကျနအေ့ထိ အပတျစဉျ တနင်ျဂနှနေတေို့ငျးတှငျ Weekend English Course ဖှငျ့လှဈသှားပါမညျ။ Summer Course တှငျ အပျနှံခဲ့သူမြားအား ကြေးဇူးတငျအလေးထားသညျ့အနဖွေငျ့ အထူးနှုနျးထားမြားဖွငျ့ ကြောငျးအပျလကျခံပေးသှားပါမညျ။
ယခုကဲ့သို့ အားလုံး အခကျအခဲမြား စမျးသပျမှုမြား ကွုံရခြိနျတှငျ သညျးခံ နားလညျပေးကွသညျ့အတှကျ မိဘမြားအား အထူး ကြေးဇူးတငျပါသညျ။
Summer School အတွက် သင်တန်းကြေးများအား စက်တင်ဘာလတွင် ၁၀၀% ပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့အထိ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတွင် Weekend English Course ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။ Summer Course တွင် အပ်နှံခဲ့သူများအား ကျေးဇူးတင်အလေးထားသည့်အနေဖြင့် အထူးနှုန်းထားများဖြင့် ကျောင်းအပ်လက်ခံပေးသွားပါမည်။
ယခုကဲ့သို့ အားလုံး အခက်အခဲများ စမ်းသပ်မှုများ ကြုံရချိန်တွင် သည်းခံ နားလည်ပေးကြသည့်အတွက် မိဘများအား အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်။